Izizathu ezi-7 zokuba ungaze undwendwele iGeorgia (ilizwe)
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo » Izizathu ezi-7 zokuba ungaze undwendwele iGeorgia (ilizwe)
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • Iindaba eziPhukileyo zaseGeorgia • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Cinga ngezi zizathu zisixhenxe zokuba kutheni ungafanele utyelele iGeorgia, ilizwe, ekudibaneni kweAsia neYurophu.
Yintoni oyivileyo ngeGeorgia, ilizwe elinqamlezileyo laseAsia naseYurophu? Saya apho, kwaye siye neengcebiso kuwe-inkcubeko, imihlaba, ukutya, iwayini, abantu-konke kunokuba yinto encinci kakhulu. Ke, kuya kufuneka ucinge ngononophelo ngaphambi kokuba uhambe. Ukukunceda, sinezizathu ezisi-7 zokuba kutheni ungafanele utyelele iGeorgia.
1. Kukutya okuzokukwenza uzive ungalunganga…
… Malunga nokutya kakhulu. Izitya zesiko ezifana ne-khinkali, i-khachapuri okanye i-pschali zenziwe ngezithako zalapha ekhaya kwaye zihlala ziphekwa kwi-oveni ezitshisiweyo. Kungekudala uyakuqaphela ukuba abantu baseGeorgia bonwabela izidlo ezinde ezifana nezesidlo kwaye bayonwabile ukwabelana nabo ngeendwendwe zelizwe labo.
2. Imbonakalo yomhlaba incinci kakhulu
Ukuma komhlaba waseGeorgia kunokubangela iingxaki xa uza kuthi uxelele abahlobo bakho ekhaya ngezinto ozibonileyo kuhambo. Kwindawo encinci kune-70 lamawaka eekhilomitha, uya kubona iindawo zonke ezinentaba: iintaba ezinekhephu, iilwandle ezinesanti, amathafa anjengentlango, iinduli ezinamatye namahlathi achumileyo.
3. Abantu baseGeorgia abakuvumeli uphumle…
..okanye ulahleke. Ngenxa yembali ende yeemfazwe, ilizwe laseGeorgia laziwa ngokuba nomsindo, kodwa oku kuhamba kunye nokubuk 'iindwendwe. Nje ukuba ungene eGeorgia, uya kuziva ngathi undwendwela abahlobo bakho bakudala - abantu baseGeorgia bayakubulisa, bazive usekhaya kwaye baya kukuhlamba kwizindululo. Awudingi ukuba nexhala lokulahleka elizweni nokuba- kwaye nokuba ungaphela ulahlekile kuhambo lwakho lwendlela, ekugqibeleni uya kuzifumana usitya isidlo sangokuhlwa kunye nosapho lwaseGeorgia emaphandleni. Ewe, ukuba ukhetha ukufumana uxinzelelo kwiholide yakho kwaye ungafuni ukwenza abahlobo abatsha, akufuneki uye eGeorgia.
Ukuba ucwangcisa ukuthatha uhambo ujikeleze iGeorgia, uya kuba nokulungiselela ukumangalisa. Kuhambo olunye ungandwendwela unxweme loLwandle oluBomvu kwaye uchithe imini yonke ushushu ilanga, kwaye ngosuku olulandelayo unyuke intaba enekhephu yaseKazbek, kamva ubuyele kwilanga laseTbilisi okanye usiya kwindawo ehlaziyayo eBorjomi. Kwelinye icala, ukuba ungumntu othanda ubumnandi, emva kwemini emva kwemvula, iGeorgia isenokungabi yindawo yakho.
Uxolo ukuphoxa, kodwa awuyi kuyifumana iwayini yaseFrance eGeorgia. Kungenxa yokuba abantu baseGeorgia bayazingca ngeevineries zabo zezona zidala ehlabathini. Isiko lokwenziwa kwewayini laseGeorgia elisusela kwixesha le-neolithic liyamkelwa kwilizwe liphela kwaye liyaxatyiswa: Indlela yokwenza iwayini yaseGeorgia isebenzisa iimbiza zodongwe ikwaqukiwe kuLuhlu lweeNkcubeko zeLifa leMveli ezingabonakaliyo.
6. Inkcubeko yasezidolophini
Ngaba undwendwela iGeorgia ngobume bayo obumangalisayo? Ukuba awukho kumdlalo wobugcisa kwaye awuyongxaki yokufumana izinto ezithile zenkcubeko, sukuya eTbilisi. Nangona kunjalo, sikholelwa ekubeni yinto engenakwenzeka ukutsiba ikomkhulu lelizwe elinabantu abangaphezulu kwesigidi esinye sabantu kunye nembonakalo ejonge phambili kwezobugcisa nenkcubeko. Ndwendwela iklabhu yaseBassiani, intengiso yeFabrika okanye iTbilisi, kwaye uya kuqaphela ukuba isixeko singaphezulu kakhulu kwezokwakha ezintle kunye neeresityu zokuhombisa.
7. IGeorgia ayiqikeleleki
Izinto ongalindelanga ukuzibona xa undwendwele iGeorgia: Ingxangxasi embindini wedolophu endala yaseTbilisi, intsalela yeziseko zomkhosi waseSoviet, indawo yokungcwaba eyadini engaphakathi yesakhiwo kwesinye sezitrato eziphambili zedolophu enkulu, indawo yeemonki Iliwa elide (I-Katskhi Pillar Pillar e-Chiatura), imifanekiso eqengqelekayo (kwi-boulevard e-Batumi)… kodwa, ungabona uninzi lwezi kwaye nangaphezulu.